သင်ရော ဒီလိုမျိုး မသိမသာ အပျင်းထူဖူးလား??? - Myanmarload
သင်ရော ဒီလိုမျိုး မသိမသာ အပျင်းထူဖူးလား???
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ က 16:47 August 10, 2017
လူပျင်းတွေ ပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ “ပျင်းတယ်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ၊ ကျန်တာ အကုန်ကောင်းတယ်” တဲ့။ အဲ့ဒီစကားက မှားတယ်လို့ ဆိုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်းနီးပါးတော့ အနည်းနဲ့ အများ ပျင်းဖူးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အပျင်းထူတယ်ဆိုတာကတော့ လုပ်စရာရှိတာ၊ လုပ်သင့်တာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မလုပ်ဘဲ ပစ်ထားတာမျိုးပါ။ ဒါမျိုးက တစ်ခါတစ်လေတော့ ကောင်းပေမဲ့ အမြဲတမ်းနီးပါ ဖြစ်လာရင်တော့ သင့်ဘဝရှေ့ရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် ကြီးမားသော စူးညောင့်ခလုတ်ကြီး တစ်ခုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အရမ်းအလုပ်များသူတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များသူတွေ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသူတွေနှင့် လွတ်လပ်မှုကို မခံစားရသူတွေ … သူတို့တွေ အနေနဲ့ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ မှာ အပျင်းထူလိုက်တာက ပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုတွေကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ဖြစ်၊ သိတတ်နားလည်တဲ့ အရွယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အများစုက ဘယ်လို အချက်လေးတွေကို မသိမသာ အပျင်းထူလေ့ ရှိလဲ … ???? သင်ရော ဒီလိုမျိုးလေးတွေ အပျင်းထူဖူးလား … ???? စသည်ဖြင့် ဆန်းစစ်ကြရအောင်
(၁) မျက်နှာမသစ်ဘဲ ထမင်းစားဖူးတယ်
(၂) တစ်နေလုံး ရေမချိုးဘဲ နေဖူးတယ်
(၃) လျှော်ပြီးသား အဝတ်တွေကို မီးပူမတိုက်ဘဲ ပစ်ထားဖူးတယ်
(၄) မဖြစ်မနေ ခေါင်းလျှော်သင့်တာကို နောက်ရက်ရွှေ့ဖူးတယ်
(၅) အတွင်းခံကို မီးပူမတိုက်ဘဲ ၀တ်ဖူးတယ်
(၆) အပြင်ကပြန်လာပြီး အဝတ်အစားမလဲဘဲ ညအိပ်ဖူးတယ်
(၇) ညဘက်ကို မျက်နှာမသစ်ဘဲ အိပ်ဖူးတယ်
(၈) သွားမတိုက်ဘဲ ညအိပ်ဖူးတယ်
(၉) ပန်းကန်၊ ခွက်တွေ ဆေးတဲ့အခါ သိပ် မပေပါဘူးဆိုပြီး ရေကျင်းပြီး ပြန်မှောက်ခဲ့ဖူးတယ်
(၁၀) အိမ်သာအသုံးပြုပြီး လက်မဆေးဘဲ နေခဲ့ဖူးတယ်
(၁၁) လက်ပေနေတာကို သေချာ မဆေး၊ မသုတ်ဘဲ အကျင်္ ီ/ ဘောင်းဘီ စသည်တို့နဲ့ သုတ်ခဲ့ဖူးတယ်
(၁၁) ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထပြီး ယူရမှာစိုးလို့ ထိုင်လျက် တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ယူခဲ့ဖူးတယ်
(၁၂) ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ပစ္စည်းကို ခြေထောက်နဲ့ လှမ်းကောက်ခဲ့ဖူးတယ်
(၁၃) တစ်နေလုံး ဘုရားမရှိခိုးဘဲ နေခဲ့ဖူးတယ် (အထူးသဖြင့် ညဘက် ဘုရားမရှိခိုးဘဲ အိပ်တယ်)
(၁၄) ဖုန်းပြောရမှာ ပျင်းလို့ ဖုန်းမကိုင်ဘဲ နေခဲ့ဖူးတယ်
(၁၅) စားပြီးသား ပန်းကန်မဆေးဘဲ မသိမသာနဲ့ ချောင်ထိုးခဲ့ဖူးတယ်
(၁၆) လက်သည်းနီတွေ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဖြစ်နေတာကို မဖျက်ဘဲ ထားဖူးတယ်
(၁၇) ဖိနပ်စင်မှာ ဖိနပ်မချွတ်ဘဲ အခန်းထဲထိ ဖိနပ်စီးဖူးတယ်
(၁၈) message မပြန်ချင်လို့ မဝင်ပါဘူးဆိုပြီး ဖျက်ပစ်ခဲ့ဖူးတယ်
(၁၉) တံမြက်စည်း မလှည်းဘဲ အမှိုက်တွေကို လက်နဲ့ပဲ ပွတ်ပြီး သိမ်းခဲ့ဖူးတယ်
(၂၀) ပစ္စည်းတစ်ခုကို သေချာ မ ရွေ့ရမှာပျင်းလို့ ခြေထောက်နဲ့ ကန် ကန်ပြီး သယ်ခဲ့ဖူးတယ်
(၂၁) တစ်နေကုန် ဘာမှမလုပ်ဘဲ တီဗီထိုင်ကြည့်ဖူးတယ်
(၂၂) တစ်နေကုန် အခန်းထဲက မထွက်ဘဲ အိပ်ယာပေါ်မှာ လှိမ့်နေခဲ့ဖူးတယ်
(၂၃) ရေဆော့နေရင်း အိမ်သာမသွားဘဲ ရှုးရှုးပေါက်ချခဲ့ဖူးတယ်
စသည် စသည်ဖြင့် မသိမသာလေး ပျင်းခဲ့ဖူးတာလေးတွေ အများကြီး ရှိဦးမှာပါ။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ အများစု လုပ်ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အချက်လေးတွေပါပဲ။ ဒီလို လုပ်ဖူးရုံနဲ့ အရမ်း အပျင်းကြီးတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဒီလို လုပ်ဖူးပေမဲ့လည်း ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးတွေမှာ ၀ီရိယ ထုတ်ပြီး ကြိုးစားတာကြောင့် လက်ရှိလောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်လေတော့ ဒီလိုမျိုးလေး ပျင်းလိုက်ရတာ သိပ် အရသာ ရှိပါတယ် …. ။
Page generated in 0.0543 seconds with5database query and5memcached query.